Ụlọ ọrụ nzacha mmanụ na China | Na mbụ
Igwe eji akwa akwa YAMATO ihe nzacha mmanụ mbụ number nọmba akụkụ bụ 6100296 ， dabara maka juki pegasus Siruba Nwanne nwoke na igwe ịkwa akwa ọzọ ama ama, nwere ike bụrụ nke a na-ejikarị na ụdị igwe dị iche iche, ụdị igwe ịkwa akwa kwesịrị ekwesị nwere agịga atọ nwere ahịrị ise. igwe ịkwa akwa 1500, YAMATO CC2700 ， YAMATO CF2300 ， YAMATO CZ6000 ， YAMATO CZ6500 YAMATO VC1700 ， YAMATO VT1500 ， YAMATOZ7000 ， YAMATO Z7500 ， ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe nzacha mmanụ igwe ọ bụla na -akwa akwa ， gbasara mgbanaka akara ncha mmanụ anyị, na mgbanaka akara akara. nzacha mmanụ n'ime ya na etiti nkwado igwe, na osisi osisi nchara.
Mpempe mmanụ na -eji akwụkwọ nzacha edo edo edo edo, Ihe nzacha mmanụ anyị na -eji njupụta, ike dị elu nke akwụkwọ nzacha, nwere ike wepu ọtụtụ adịghị ọcha, mee ka igwe na -arụ ọrụ nke ọma, ma ọ bụrụ na ọ bụghị nhicha mmanụ nhicha mmanụ nwere ike ibute mgbasa ozi adịghị ọcha. igwe ịkwa akwa, belata ndụ ọrụ nke igwe ịkwa akwa, iji ezigbo nzacha mmanụ nwere ike ime ka igwe na -arụ ọrụ ogologo oge, yabụ ojiji oge nzacha, anyị na -atụ aro na opekata mpe ọkara afọ n'otu oge ịgbanwe. Ọ bụ naanị n'ụzọ dị otu a ka enwere ike ikwe nkwa ịdị mma nke igwe ịkwa akwa.
Ọnụ ego nzacha mmanụ anyị dị ọnụ ala, njikwa njikwa siri ike, dị oke ọnụ, a na-erekwa ya ma n'ime ụlọ ma na mba ọzọ, ndị ahịa na-azụrụ ha ogologo oge. Ụdị akụkụ mbụ ruru eru nwere ike ime ka igwe gbanwee ngwa ngwa, nwekwuo ike ịkwa akwa akwa pụrụ iche, yana ogologo ndụ ọrụ, nke na -ebelata ọnụ ahịa ndị ahịa nke ukwuu. na ịhapụ ụlọ ọrụ anyị niile bụ akụkụ ịkwa akwa mbụ A-naanị anyị na-enye YAMATO Original ịkwa akwa accessoreis.
Osote: Ogwe nri FD 68106